2022 Honda Passport rally rori kukwikwidza muAmerican Rally Association akateedzana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » 2022 Honda Passport rally rori kukwikwidza muAmerican Rally Association akateedzana
Chikwata chevainjiniya veHonda chiri kutora mujaho mutsva weHonda Passport rally. Honda yakafumura rori yayo ye2022 Passport nhanho rally yakanyatsogadzirirwa kukwikwidza neHonda Performance Development (HPD) Maxxis Rally timu yekumhanya, ichijekesa kugona kwakasimba uye kusimba kwenguva refu zvakagadzirwa mumotokari dzemotokari dzeHonda.
Kuratidzira dhizaini nyowani ye2022 Passport, rally rori yakagadzira mujaho wayo kuLake Superior Performance Rally (LSPR) kuMichigan musi waGumiguru 15 na16. Ichakwikwidza muAmerican Rally Association (ARA) nhepfenyuro yerally-kosi rally zviitiko kuburikidza nemwaka we2022 mukirasi Yakatemerwa 4WD.
Muenzaniso wakakosha weHonda "Mujaho weMweya," iyo HPD Maxxis Rally inomhanya timu inoumbwa nehama dzeHonda dzinogara kukambani yeOhio-based Auto Development Center. Chikwata ichi chinotsigira cheHonda hombe yeAmerica Mujaho Wechikwata (HART), iyo inoumbwa nevanoshamwaridzana kubva mukuvandudza uye zvivakwa zvekugadzira muNorth America yese.
Nedzimotokari dzemumigwagwa dzakachinjika dzinosvika pakumhanya kweanopfuura zana mph pamakosi echisikigo-akavharwa anosanganisira matombo, mavhu, matope nechando pamusoro pemigwagwa inofukidza mazana emakiromita, iyo ARA National uye Regional Championship akateedzana anokwikwidza zvakanyanya. Kumumhanyi weLSPR, iyo Honda Passport rally rori yaityairwa nainjiniya weHonda Chris Sladek, injinjini yekumisa yekumisheni yakamisikidzwa kuOhio-based North American Auto Development Center, uye inotungamirwa naGabriel Nieves, chassis dhizaini enjiniya nzvimbo imwechete.
Zvekuwandisa uye kuita, iyo Passport rally rori yakaiswa neBRAID Winrace T rally mavhiri (7.5 ″ x17 ″) akaputirwa mune chero Maxxis 'sosi rally-yakasimbiswa RAZR M / T kana RAZR A / T matai (265/70-R17) , zvinoenderana nemamiriro ezviitiko. Tsika-yakagadzirirwa 1/8 ″ -inch gobvu yealuminium pani uye kumashure masiyano skid mahwendefa anodzivirira pasi pemunhu, pamwe neepamusoro-density polyethylene mapaneru anovhara tangi remafuta nezvimwe zvinhu. Carbotech XP12 mabhureki emabhureki uye yakanyanya-tembiricha yekumhanyisa mabhureki emvura inopa isingachinji mabhureki mashandiro munzvimbo dzinoda rally.
Zvinoshamisa, iyo Pasipoti inogadzira 3.5-litre i-VTEC ® V6, 9-inomhanya otomatiki kutapurirana nemapaddhi shifters, akangwara Variable Torque Management (i-VTM4 ™) ese-vhiri dhiraivhu system, uye zvese zvinomiswa zvinhu zvinosiiwa zvisina kugadziridzwa zvemakwikwi; iyo chete yekuwedzera ndeye otomatiki hutachiwana hwemvura inotonhorera kubva kuPasipoti inowanikwa tururu. Mutyairi anoshandisa iyo Sequential modhi yekufambisa uye padhaya shifters kuitira kusimudzira kutonga, uye iyo Passport's Intelligent Traction Management system yeSand Mode inoshandiswa kuitira yakakwana torque kugovera uye kuita pane yakasununguka nzvimbo.
"Idi rekuti isu hatina kufanira kugadzirisa chero munzira ye2022 Honda Passport kana kumiswa kwenzvimbo dzinoranga uye makwikwi zvinoratidza zvakanyanya kugona uye kuita kunouya kwakajairika muPasipoti," akadaro Honda injiniya uye mujaho wemujaho Chris Sladek .
Zvekuwedzera kuchengetedzeka, mukati mePasipoti rally rori inosanganisira OMP kumhanya zvigaro zvine matanhatu-poindi makwikwi emahara, chengetedzo roll roll, chengetedzo yemoto system, rally komputa uye mune-mota kutaurirana system. Kuti kuderedze huremu, zvigaro zvekumashure, carpeting, kuputira izwi, uye zvimwe zvidimbu zvemukati zvakabviswa, uye girazi reSUV uye girazi remberi rewindo rakatsiviwa neLexan polycarbonate. Iyo hydraulic handbrake mubato inowedzera maneuverability kuburikidza neakasimba makona, nepo iyo yakachinjika yekuzadza inogadzira siginecha rally-yakafuridzirwa kurira. Yakagadzirwa neHPD, iyo Pasipoti yekunze yekumonera mifananidzo inoratidza kusimba uye kugona kugona kweiyo Honda Passport.
"Isu takagadzirira kuenda kumhanya neyakaremara 2022 Honda Passport," akadaro injiniya weHonda uye mutyairi pamwe naye Gabriel Nieves. "Unenge uri mwaka wakanaka."
Pa2021 Lake Superior Performance Rally munaGumiguru 15 ne16, timu yakakwikwidza muARA East Regional nhepfenyuro. Zuva rekutanga remakwikwi aya raive nematanho ekumhanyisa ane kuyerera kwakakombama uye akamhanya kusvika pakati pehusiku, uko bhaa repasipoti repasipoti raive rakakosha mukuchengetedza kumhanyisa kumhanya musango. Chikwata ichi chakamhanya nguva pakati pevane gumi varinani kubva pavakwikwidzi vematunhu makumi mana, asi tai de-bead padanho rechitatu rakabata timu kumashure, richivaita kuti vapedze maminetsi anodarika mapfumbamwe kupfuura zvaitarisirwa padariro.
Mamwe matanho ehunyanzvi, akaomarara, uye akanyorova aive akachengeterwa zuva rechipiri, nePasipoti ichiita zvakanaka pamatairi eMaxxis RAZR M / T. Chikwata ichi chakaramba chakatumira nguva pakati pemakwikwi epamusoro gumi nematatu emakwikwi.
Chikwata chakapedza makumi maviri nemavirind kunze kwevane makwikwi ematunhu, vachiisa 42th kunze kwevatanhatu vakwikwidzi mukirasi Yakatemerwa 6WD.
2021 LSPR chiitiko chechitatu che rally umo timu yakakwikwidza muHonda Passport. Munguva yechiitiko chayo chekutanga-iyo 2019 yekumaodzanyemba Ohio Forest Rally (SOFR), sechikamu cheAFA East Regional nhepfenyuro- timu yakaisa 2nd mukirasi Yakatemerwa 4WD uye gumi nemavirith zvachose kubva pavakwikwidzi makumi manomwe nemashanu.